Nanodinkodina zaza tsy ampy taona : nohelohina sazy mihantona roa taona ilay pasitera | NewsMada
Nanodinkodina zaza tsy ampy taona : nohelohina sazy mihantona roa taona ilay pasitera
Tsy afa-bela fa nohelohin’ny fitsarana sazy mihantona roa taona nandritra ny fotoam-pitsarana ady heloka bevava tao Toamasina, omaly ilay pasitera amin’ny fiangonana zandriny ao Brickaville noho ny fanodinkodinana zaza tsy ampy taona…
Fantatra nandritra ny fotoam-pitsarana ady heloka bevava tao amin’ny lapan’ny Fitsarana ambony Toamasina nandritra ny famakiana ny antontan-taratasin’ady fa voampanga ho nanodinkodina ankizivavy tsy ampy taona ity raim-pianakaviana milaza fa pasitera amin’ny fiangonana zandriny ao Brickaville ity. Raha iverenana ny raharaha araka ny fifandaharana teo amin’ny voampanga tsy natrehan’ny niharam-boina sy ny mpitory fa ny volana mey 2016 dia nitondra ankizivavy 17 taona niala tao Brickaville nandositra tany Ambositra ilay pasitera avy amin’ny fiangonana sekta. Ny zandary tao Ambositra no nisambotra azy sy ilay ankizivavy ka namerina azy ireo tany Brickaville nanaovana famotorana. Naiditra am-ponja vonjimaika ilay pasitera taorian’izay.
Nilaza izy fa hoe hanambady ilay ankizivavy tsy ampy taona rehefa tafavoaka ny fonja. Fantatra nandritra ny fanadihadiana fa efa manambady hafa koa ity pasitera nahavita fihetsika mamoafady ity. Teo amin’ny famakian’ny filohan’ny fitsarana ny antontan-taratasin’ady rehetra avy amin’ny zandary no nahenoana fa tsy pasitera ara-dalana ity raim-pianakaviana ity fa pasitera sandoka, saingy nahavariana satria mitondra fiangonana ao Brickaville izy.
Tokony hojeren’ny fanjakana akaiky ny momba itony fiangonana sekta miorina isaky ny elakelan-trano itony satria milalao ny fahasahiranan’olona fotsiny ny ankamaroan’izy ireny. Misy aza milaza fa mahavita fahagagana ao anatin’ny indray mipi-maso ka milaza fa mahavita an’izao sy izao. Mandrebireby olona fotsiny. Tsy vitan’izay fa mbola manao fihetsika mamoafady toy izao koa. Mampahatsiahy ilay mpitondra fiangonana iray eny Itaosy naiditra am-ponja ity raharaha ity.